အလုပ်မှာ အချိန်ဖြုန်းမိနေပါသလား – Gentleman Magazine
သင် တစ်နေ့ကို အလုပ်မှာ ဘယ်လောက်ကြာကြာ အာရုံလွှဲခံရလဲဆိုတာ တွက်ကြည့်ကြရအောင်။
သင် အလုပ်မှာ တစ်နေ့ကို ဘယ်နှကြိမ် အနှောင့်ယှက်ခံရလဲဆိုတာ စဉ်းစားကြည့်ပါ။
့ပြီးရင် ရတဲ့ အကြိမ်အရေအတွက်ကို ၂၅ နဲ့ မြှောက်ပါ။
အဲဒါဟာ အလုပ်မှာ သင် ဆုံးရှုံးလိုက်ရတဲ့ အာရုံစူးစိုက်ချိန် မိနစ်ပါပဲ။ အနှောင့်အယှက် ခံလိုက်ရပြီးမှာ သင် အရင်က စိတ်ဝင်စားနေစဉ် လုပ်ခဲ့တဲ့ အာရုံစူးစိုက်မှုမျိုးကို ပြန်ရောက်ဖို့ ၂၅ မိနစ် အချိန်ယူရပါတယ်။ နှောင့်ယှက်တာဟာ နှောင့်ယှက်ခံနေရချိန်မှာသာ မဟုတ်ပဲ နောက်ထပ် နာရီဝက်လောက် ကြာအောင် အလုပ်ထဲမှာ အာရုံမစိုက်နိုင်အောင် လုပ်နိုင်ပါတယ်။
သင် FB ကို စက္ကန့် ၃၀ လောက် ဝင်ကြည့်လိုက်တာဟာ စက္ကန့်သုံးဆယ်ပဲ အချိန်ဆုံးရှုံးသွားတာ မဟုတ်ပါဘူး။ မိနစ် ၃၀ ပါ။
အဲဒိ နှောင့်ယှက်မှုတွေဟာ အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်းကိုသာ ထိခိုက်တာ မဟုတ်ပဲ စိတ်ခံစားမှုတွေကိုပါ နှောင့်ယှက်နိုင်ပါတယ်။ အာရုံစိုက်နေစဉ် အနှောင့်ယှက်ခံရတာဟာ စိတ်ဖိစီးမှု များစေခြင်း၊ စိတ်ညစ်စေခြင်း၊ အလုပ်လုပ်နိုင်အား လျော့နည်းစေခြင်းတို့ ဖြစ်လာစေနိုင်ပါတယ်။
အာရုံစူးစိုက်မှုကို ကိုယ့်ဘာသာ နှောင့်ယှက်မိတာက ပိုများပါတယ်။ ဥပမာ အလုပ်လုပ်နေတုန်း FB ဝင်ကြည့်မိတာ၊ CoC ဝင် ကြည့်မိတာမျိုးပါ။ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်တစ်ယောက်လာပြီး ” ဒီစာရင်းလေး ခဏ ကြည့်ပေးပါဦး” ဆိုတာမျိုးက ပြင်ပအနှောင့်အယှက်ပါ။
လေ့လာမှုတွေမှာ တွေ့ရှိရတာက ခုခေတ် လူတွေဟာ အလုပ်တစ်ခုမှာ သုံးမိနစ်လောက်ပဲ ကြာအောင်လုပ်ပါတယ်။ ပြီးရင် နောက်တစ်ခုကို လုပ်ကြပါတယ်။ တင်းနစ်ဘောလုံးတစ်လုံးကို ဟိုဘက်ဒီဘက် ရိုက်နေသလို အလုပ်နှစ်ခုကို ကူးသန်းပြီး လုပ်တတ်ကြပါတယ်။ ဦးနှောက်ကတော့ တင်းနစ်ဘောလို ချက်ခြင်း ဦးတည်ချက် မပြောင်းနိုင်ပဲ အချိန်ယူရပါတယ်။
အဲဒါဟာ အချိန်းဖြုန်းရာ ရောက်ရုံတင်မဟုတ်ပဲ ဦးနှောက်ကနေ အာရုံမစူးစိုက်မိလို့ အကြံကောင်းတွေလဲ ထွက်မလာနိုင်ပါဘူး။ ၁၀ မိနစ်ကို တစ်ခုပြောင်းလုပ်နေတဲ့ လူတွေဟာ လေးလေးနက်နက် မတွေးခေါ်နိုင်ပါဘူး။
သင့်ကိုယ်သင် ” ငါကတော့ အဲဒိထဲ မပါပါဘူးကွာ၊ ငါ ခဏလေးနဲ့ အာရုံစိုက်နိုင်ပါတယ် ” ဆိုပြီးထင်နေပါသလား။ သမိုင်းထဲမှာတော့ အဲ့လို အာရုံစိုက်နိုင်တဲ့ သူတစ်ယောက် ရှိခဲ့ဖူးပါတယ်။ တယောဝိဇ္ဇာ Mozart ကို ကြားဖူးပါသလား။ တစ်ချိန်ထဲမှာ ဂီတသံစဉ်တွေ အများကြီး ရေးခဲ့ဖူးပြီး အားလုံးကလဲ Masterpiece တွေပါပဲ။ ဒါပေမယ့် သူ့လိုလူ သူတစ်ယောက်ထဲ ရှိခဲ့တာပါ။
တခြား ပထမတန်း ဂီတစာဆိုတွေ ဖြစ်တဲ့ Handel, Haydn, Verdi တို့ဟာ တစ်ုဒ်ပြီးမှ တစ်ပုဒ် ရေးခဲ့တာပါ။ သူတို့ ဂီတတစ်ပုဒ်ကို ရေးပြီးလို့ စိတ်ကြိုက် မဖြစ်မခြင်း နောက်တစ်ပုဒ်ကို လုံးဝ မစဉ်းစားပါဘူး။ ကုမ္ပဏီဝန်ထမ်းတွေ၊ အမှုဆောင်တွေမှာလဲ Mozart တွေ ရှားပါလိမ့်မယ်။
သင့်ကို ဖြစ်နိုင်ခြေပိုများတဲ့ Mozart လိုလူ မဟုတ်ဘူးလို့ပဲ စဉ်းစားရအောင်။ အဲဒိလို အနှောင့်အယှက် မခံရအောင် ဘာတွေ လုပ်ကြမလဲ။
အနှောင့်အယှက် မခံရအောင် နေနည်း
အာရုံစူးစိုက်ဖို့ အချိန်သတ်မှတ်ထားပါ။ အဲလိုဆိုရင် အနှောင့်အယှက်တွေအတွက်လဲ အချိန် သတ်မှတ်ရပါမယ်။ ဥပမာ. ” ငါ ညနေ ၃ နာရီမှ FB ဖွင့်စစ်မယ် ” ဆိုတာမျိုးပါ။ ဒါဆိုရင် ဆက်တိုက် FB ဖွင့် မကြည့်မိပဲ အလုပ် စိတ်ပါဝင်စားစွာ လုပ်နိုင်လာပါလိမ့်မယ်။ အဲလို အစီအစဉ် မချရင်တော့ တစ်နေ့လုံး FB ကြည့်နေမိပြီး အလုပ်လုပ်နိုင်မှာ မဟုတ်တော့ပါဘူး။
Intel မှာ ဝန်ထမ်းတွေဟာ အလုပ်တွေပိပြီး လွတ်လွတ်လပ်လပ် စဉ်းစားဖို့ အချိန်မရလို့ အတွေးအခေါ်အသစ်တွေ၊ တီထွင်ဖန်တီးမှုတွေ ထွက်မလာပဲ ဖြစ်နေခဲ့ဖူးပါတယ်။ အဲဒါကို Intel မန်နေဂျာတွေက တစ်ပါတ်ကို လေးနာရီ လုံးဝ စဉ်းစားတွေးခေါ်ဖို့ အချိန်ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဲဒိအချိန်မှာ ဝန်ထမ်းတွေဟာ အလုပ်မလုပ်ရပါဘူး။ အရေးမပါတဲ့ Email တွေကို မဖတ်ရ၊ မပြန်ရပါဘူး။ အဲဒိနည်းလမ်းဟာ အောင်မြင်ခဲ့ပြီးတော့ ဝန်ထမ်းတစ်ယောက်ဟာဆို Application အသစ်တစ်ခုကို တီထွင်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အနှောင့်အယှက်တွေကြောင့် ဘာတွေဆုံးရှုံးရလဲဆိုတာ သိထားတာ ကောင်းပါတယ်။ အနှောင့်အယှက်မရှိပဲ အလုပ်လုပ်နိုင်မယ့် အချိန်ကို ကြိုးစားသတ်မှတ်ထားပါ။ သင့်ပါတ်ဝန်းကျင်က လူတွေကိုလဲ သင် အဲဒိလို သတ်မှတ်ထားကြောင်းသိပါစေ။ သူတို့ကိုလဲ အဲလို လုပ်ဖို့ တိုက်တွန်ပြောဆိုပါ။ သင် အောင်မြင်ပါလိမ့်မယ်။
သငျ တဈနကေို့ အလုပျမှာ ဘယျလောကျကွာကွာ အာရုံလှဲခံရလဲဆိုတာ တှကျကွညျ့ကွရအောငျ။
သငျ အလုပျမှာ တဈနကေို့ ဘယျနှကွိမျ အနှောငျ့ယှကျခံရလဲဆိုတာ စဉျးစားကွညျ့ပါ။
့ပွီးရငျ ရတဲ့ အကွိမျအရအေတှကျကို ၂၅ နဲ့ မွှောကျပါ။
အဲဒါဟာ အလုပျမှာ သငျ ဆုံးရှုံးလိုကျရတဲ့ အာရုံစူးစိုကျခြိနျ မိနဈပါပဲ။ အနှောငျ့အယှကျ ခံလိုကျရပွီးမှာ သငျ အရငျက စိတျဝငျစားနစေဉျ လုပျခဲ့တဲ့ အာရုံစူးစိုကျမှုမြိုးကို ပွနျရောကျဖို့ ၂၅ မိနဈ အခြိနျယူရပါတယျ။ နှောငျ့ယှကျတာဟာ နှောငျ့ယှကျခံနရေခြိနျမှာသာ မဟုတျပဲ နောကျထပျ နာရီဝကျလောကျ ကွာအောငျ အလုပျထဲမှာ အာရုံမစိုကျနိုငျအောငျ လုပျနိုငျပါတယျ။
သငျ FB ကို စက်ကနျ့ ၃၀ လောကျ ဝငျကွညျ့လိုကျတာဟာ စက်ကနျ့သုံးဆယျပဲ အခြိနျဆုံးရှုံးသှားတာ မဟုတျပါဘူး။ မိနဈ ၃၀ ပါ။
အဲဒိ နှောငျ့ယှကျမှုတှဟော အလုပျလုပျနိုငျစှမျးကိုသာ ထိခိုကျတာ မဟုတျပဲ စိတျခံစားမှုတှကေိုပါ နှောငျ့ယှကျနိုငျပါတယျ။ အာရုံစိုကျနစေဉျ အနှောငျ့ယှကျခံရတာဟာ စိတျဖိစီးမှု မြားစခွေငျး၊ စိတျညဈစခွေငျး၊ အလုပျလုပျနိုငျအား လြော့နညျးစခွေငျးတို့ ဖွဈလာစနေိုငျပါတယျ။
အာရုံစူးစိုကျမှုကို ကိုယျ့ဘာသာ နှောငျ့ယှကျမိတာက ပိုမြားပါတယျ။ ဥပမာ အလုပျလုပျနတေုနျး FB ဝငျကွညျ့မိတာ၊ CoC ဝငျ ကွညျ့မိတာမြိုးပါ။ လုပျဖျောကိုငျဖကျတဈယောကျလာပွီး ” ဒီစာရငျးလေး ခဏ ကွညျ့ပေးပါဦး” ဆိုတာမြိုးက ပွငျပအနှောငျ့အယှကျပါ။
လလေ့ာမှုတှမှော တှရှေိ့ရတာက ခုခတျေ လူတှဟော အလုပျတဈခုမှာ သုံးမိနဈလောကျပဲ ကွာအောငျလုပျပါတယျ။ ပွီးရငျ နောကျတဈခုကို လုပျကွပါတယျ။ တငျးနဈဘောလုံးတဈလုံးကို ဟိုဘကျဒီဘကျ ရိုကျနသေလို အလုပျနှဈခုကို ကူးသနျးပွီး လုပျတတျကွပါတယျ။ ဦးနှောကျကတော့ တငျးနဈဘောလို ခကျြခွငျး ဦးတညျခကျြ မပွောငျးနိုငျပဲ အခြိနျယူရပါတယျ။
အဲဒါဟာ အခြိနျးဖွုနျးရာ ရောကျရုံတငျမဟုတျပဲ ဦးနှောကျကနေ အာရုံမစူးစိုကျမိလို့ အကွံကောငျးတှလေဲ ထှကျမလာနိုငျပါဘူး။ ၁၀ မိနဈကို တဈခုပွောငျးလုပျနတေဲ့ လူတှဟော လေးလေးနကျနကျ မတှေးချေါနိုငျပါဘူး။
သငျ့ကိုယျသငျ ” ငါကတော့ အဲဒိထဲ မပါပါဘူးကှာ၊ ငါ ခဏလေးနဲ့ အာရုံစိုကျနိုငျပါတယျ ” ဆိုပွီးထငျနပေါသလား။ သမိုငျးထဲမှာတော့ အဲ့လို အာရုံစိုကျနိုငျတဲ့ သူတဈယောကျ ရှိခဲ့ဖူးပါတယျ။ တယောဝိဇ်ဇာ Mozart ကို ကွားဖူးပါသလား။ တဈခြိနျထဲမှာ ဂီတသံစဉျတှေ အမြားကွီး ရေးခဲ့ဖူးပွီး အားလုံးကလဲ Masterpiece တှပေါပဲ။ ဒါပမေယျ့ သူ့လိုလူ သူတဈယောကျထဲ ရှိခဲ့တာပါ။
တခွား ပထမတနျး ဂီတစာဆိုတှေ ဖွဈတဲ့ Handel, Haydn, Verdi တို့ဟာ တဈုဒျပွီးမှ တဈပုဒျ ရေးခဲ့တာပါ။ သူတို့ ဂီတတဈပုဒျကို ရေးပွီးလို့ စိတျကွိုကျ မဖွဈမခွငျး နောကျတဈပုဒျကို လုံးဝ မစဉျးစားပါဘူး။ ကုမ်ပဏီဝနျထမျးတှေ၊ အမှုဆောငျတှမှောလဲ Mozart တှေ ရှားပါလိမျ့မယျ။
သငျ့ကို ဖွဈနိုငျခွပေိုမြားတဲ့ Mozart လိုလူ မဟုတျဘူးလို့ပဲ စဉျးစားရအောငျ။ အဲဒိလို အနှောငျ့အယှကျ မခံရအောငျ ဘာတှေ လုပျကွမလဲ။
အနှောငျ့အယှကျ မခံရအောငျ နနေညျး
အာရုံစူးစိုကျဖို့ အခြိနျသတျမှတျထားပါ။ အဲလိုဆိုရငျ အနှောငျ့အယှကျတှအေတှကျလဲ အခြိနျ သတျမှတျရပါမယျ။ ဥပမာ. ” ငါ ညနေ ၃ နာရီမှ FB ဖှငျ့စဈမယျ ” ဆိုတာမြိုးပါ။ ဒါဆိုရငျ ဆကျတိုကျ FB ဖှငျ့ မကွညျ့မိပဲ အလုပျ စိတျပါဝငျစားစှာ လုပျနိုငျလာပါလိမျ့မယျ။ အဲလို အစီအစဉျ မခရြငျတော့ တဈနလေုံ့း FB ကွညျ့နမေိပွီး အလုပျလုပျနိုငျမှာ မဟုတျတော့ပါဘူး။
Intel မှာ ဝနျထမျးတှဟော အလုပျတှပေိပွီး လှတျလှတျလပျလပျ စဉျးစားဖို့ အခြိနျမရလို့ အတှေးအချေါအသဈတှေ၊ တီထှငျဖနျတီးမှုတှေ ထှကျမလာပဲ ဖွဈနခေဲ့ဖူးပါတယျ။ အဲဒါကို Intel မနျနဂြောတှကေ တဈပါတျကို လေးနာရီ လုံးဝ စဉျးစားတှေးချေါဖို့ အခြိနျပေးလိုကျပါတယျ။ အဲဒိအခြိနျမှာ ဝနျထမျးတှဟော အလုပျမလုပျရပါဘူး။ အရေးမပါတဲ့ Email တှကေို မဖတျရ၊ မပွနျရပါဘူး။ အဲဒိနညျးလမျးဟာ အောငျမွငျခဲ့ပွီးတော့ ဝနျထမျးတဈယောကျဟာဆို Application အသဈတဈခုကို တီထှငျနိုငျခဲ့ပါတယျ။
အနှောငျ့အယှကျတှကွေောငျ့ ဘာတှဆေုံးရှုံးရလဲဆိုတာ သိထားတာ ကောငျးပါတယျ။ အနှောငျ့အယှကျမရှိပဲ အလုပျလုပျနိုငျမယျ့ အခြိနျကို ကွိုးစားသတျမှတျထားပါ။ သငျ့ပါတျဝနျးကငျြက လူတှကေိုလဲ သငျ အဲဒိလို သတျမှတျထားကွောငျးသိပါစေ။ သူတို့ကိုလဲ အဲလို လုပျဖို့ တိုကျတှနျပွောဆိုပါ။ သငျ အောငျမွငျပါလိမျ့မယျ။
Previous: ပျော်ရွှင်အောင်မြင်ကျန်းမာတဲ့ဘဝကို ပိုင်ဆိုင်ဖို့ အချက် ၈ ချက်
Next: ၀န်ထမ်းတိုင်းသိထားရမယ့် အစည်းအဝေး ထုံးစံစည်းကမ်းများ